UZIKALALA UTHI SIZOQININA ISANDLA KWABANGALALELI IMIYALELO YE-LOCKDOWN – Sivubela intuthuko Newspaper
UZIKALALA uthi sizoqina isandla kwabangalandeli imiyalelo ye-Lockdown KZN
UNDUNANKULU wesifundazwe iKwaZulu Natal uSihle Zikalala uthi bazoyikhotha imbenge yomile abazophula umthetho wezinsuku ezingamashumi amabili nanye zokumiswa kwezwe ngenxa yobhubhane iCorona Virus ehlasele umhlaba wonke.
“Ngifisa ukuqwashisa laba abazogcaluza emgwaqeni bengayilandeli imigudu bazozithola besenkingeni kwazise amasosha asazosatshalaliswa kanye namaphoyisa ukubheka isimo, sizoqinisa isandla kulabo abangalandeli imiyalelo,”.
Leli gciwane iCorona Virus selihaqe abantu abalinganiselwa abangaphezulu kwenkulungwane kanti sekushone ababili ngenxa yalolu bhubhane. UNdunankulu uveze ukuthi abantu kumele balalele njengoba kuzoba nenqwaba yezivimbamgwaqo ukubheka labo abagcaluzayo ngaphandle kwesidingo.
“Sizoba nezivimbagwaqo ezobe iholwa amaphoyisa ngokubambisana namasosha ukubheka ukuthi abantu bayayilandela yini imigomo ebekiwe. Siyazi kwezinye izindawo abengakobonakali amasosha kodwa asazojutshwa ukuzoqapha isimo,” kusho Zikalala.
UNdunankulu uthinte udaba lokushoda kwezimfonyo waveza ukuthi umnyango uzolusukumela lolu daba ukuthi abantu bayahlinzekwa ngezinsiza. UZikalala ekhuluma nabezindaba uveze bazohlala phansi baxoxisane nenhlangano yamatekisi ukubheka uhlelo lwezithuthi ukuze labo basebenzi okufanele baye emsebenzini.
“Sizohlala phansi sixoxisane neSANTACO ukubonisana ngezindlela zokuthi bazothuthwa kanjani abasebenzi ikakhulukazi labo abenza umsebenzi obucayi,” esho.
Amabhizinisi amaningi anyusa amanani kanti lokhu uhulumeni wesifundazwe usuzibophezele ukulandela lolu daba. “Siyazi ukuthi kwezinye izitolo sekunyuswe amanani ngenhloso yokwenza inzuzo ngesikhathi esibucayi nosizi olubhekene nezwe ,”
Udaba lwamanzi alusalanga ngaphandle njengoba kunomasipala abashoda ngamanzi. UZikalala uveze ukuthi bazozama ukuhambisa amathangi wamanzi kulezo zindawo. Undunankulu ube esedlulisa amazwi enduduzo kulaba ababili okubike uMnyango wezeMpilo ukuthi sebedlulile emhlabeni.”Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo kulaba asebedlulile emhlabeni esifundazweni iNtshonalanga Kapa.” Kuphetha uZikalala.
Elakuleli lingelinye lamazwe elihaqwe yileli gciwane nelibonakala sinyuka ngesivinini isibalo sabantu abahaqwa yilolubhubhana iCorona Virus. Emizameni yokunqanda lokhu uMengameli wezwe umemezele izinhlelo ezingasiza ukuthi kungabhebhetheki ukutheleleka kwalegciwane, njengokuvala ukuthi abantu bangahlanyeli ndawonye babe ngaphezulu kwekhulu, bahlambe izandla ngaso sonke isikhathi, uma bekhwehlela bavale umlomo njengoba leli gciwane lithathelana kalula.
UMEYA WASEMZUMBE UTHULA IDRAFT BUDGET KA 2020/2021
ZIQHUBEKA EMISAKAZWENI NAKUMAPHEPHANDABA IZIFUNDO